Shirkii madasha maamul goboleedyada Soomaaliya oo la soo gabagabeeyay –War-murtiyeed - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShirkii madasha maamul goboleedyada Soomaaliya oo la soo gabagabeeyay –War-murtiyeed
October 25, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Calamada madasha maamul goboleedyada oo ka dul lulanaya goobta shirka ee Garoowe. [Sawirka: Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada Puntland]
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirkii madasha maamul goboleedyada Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyay ka socdaya magaalada Garoowe ayaa maanta oo Khamiis ah la soo gabgabeeyay.
Madaxweynayaasha Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland oo martigelinaysa ayaa ka soo qeybgalay shirka.
Bayaan ka soo baxay shirka ayaa diirada lagu saaray arrimaha amniga iyo siyaasadda.
Hoos ka akhriso bayaanka shirka: